14ka Bangiyada Ugu Fiican Online Sida Chime 2021 | Liis buuxa
Bogga ugu weyn 14ka Bangiyada Ugu Fiican Online Sida Chime 2021 | Liis buuxa
kasta ganacsi leeyahay tartan. Markaad u malaynayso inaad wada aragtay, waxaad ogaanaysaa mid kale.
Muddo sanado ah Bangiga internetka ee Chime wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo bangiyada dhaqanka laakiin maanta, waxaa jira dhowr bangi oo kale oo ku habboon oo jaban oo kuu oggolaanaya inaad kasbato tan lacag ah oo dulsaar ah.
Maqaalkan, waxaan ku eegi doonaa 14 bangi oo internetka ah sida chianiga Bangiyadan, waxaad ku heli kartaa dalab koontada kaydka wax -soo -saarka oo sarreeya oo ku saabsan dhalidda boqolkiiba sannadlaha ah (APY). Akhri si aad u ogaato ikhtiyaarka ugu fiican adiga.
Bangiyada internetka waxay kuu oggolaanayaan inaad la socoto dheelitirka koontadaada, macaamil maalmeedka, iyo kaydinta meel kasta. Marka loo eego tirakoobka bangiyada internetka ee sahan 2018, 73% macaamiisha ayaa adeegsada kanaalka bangiga ee internetka ugu yaraan hal mar 30kii maalmoodba.
Bangiyada internetka waxay bixiyaan faa'iidooyin badan oo la mid ah bangiyada dhaqanka, sida barnaamijyada moobiilka ee adag iyo alaabo maaliyadeed oo kala duwan. Haddii aadan weli lahayn koonto bangi oo onlayn ah, tani waa fursad aad ku dooran karto kuwa ugu fiican.
Liiska Bangiyada Khadka Tooska ah ee ugu Fiican Kaydka
Hoos waxaa ku qoran liiska akoonnada bangiga ee ugu fiican. Shuruudaha xulashada bangiyadaani waa sumcadooda adduunka, APY Lacagta Billaha ah iyo darajooyinka daabacaadaha ugu sarreeya sida JD Power 2020 Daraasadda Qancinta Bangiga Tooska ah ee Mareykanka.
#1. Baro Bangiga
Lacagta Billaha ah
0% None Gaaritaanka ATM
Bangiga Discover wuxuu bixiyaa gunno kaarka deynta ah oo gaar ah. Koontada jeegga internetka ee Discover waxay bixisaa ilaa 1% kaash ah illaa $ 3,000 oo lacag -celin ah oo ku saabsan iibsashada u -qalmitaanka bishii. Waxaad ururin kartaa ilaa $ 360 sanadkii haddii aad sare u qaaddo dalabka.
Intaa waxaa sii dheer, baanka internetka ee Discover (Xubin, FDIC) wuxuu bixiyaa alaabada hubinta iyo kaydinta, iyo sidoo kale CD IRA.
#2. Bangiga Ally
0.10% (ka yar $ 15,000) ilaa 0.50% (ka sarreeya $ 15,000) None Kaalinta labaad
Ally waa mid ka mid ah bangiyada internetka ee ugu sarreeya uguna caansan oo leh koonto si sahlan loo isticmaali karo oo aan bixin wax dayactir bille ah. Koontada jeegga ee Ally uma baahna deebaaji ugu yaraan ah si aad u furato koonto, waxaad kasbataa dulsaar yar oo dheelitirkaaga ah, jeegagga caadiga ahna had iyo jeer waa bilaash.
Ally waxay macaamiisha siisaa adeegyo 24/7 ah oo leh barnaamij mobile aad loo qiimeeyo. Ally wuxuu muujiyaa in ka badan 43,000 Allpoint ATM-yada lacag la’aan wuxuuna sidoo kale dib u soo celiyaa ilaa $ 10 oo ah lacagaha ATM ee aad siiso bangiyada kale.
#3. Bangiga Chase
0% $ 12, iyada oo la heli karo dhaafyo Bixinta Lacagta ugu Fiican
Bangiga Chase waa beddel shime oo weyn oo caan ku ah inuu bixiyo gunno cajiib ah. Dalabku waa mid laga heli karo waddanka oo dhan, waxaadna heli kartaa $ 200 oo gunno ah haddii aad buuxiso shuruudo gaar ah.
Koontada Hubinta Bangiga Chase waxay leedahay ujro adeeg bille ah oo ah $ 12. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira lacag -dhaaf bilaash ah haddii aad dhigato dhigaal toos ah ugu yaraan $ 500 bishii, $ 1,500 dheelitirka ugu yar ee maalinlaha ah, ama ugu yaraan $ 5,000 maalin kasta xisaabaadka u -qalmitaanka Chase.
Macaamil ahaan Bangiga Chase, waxaad marin u heli kartaa 16,000 oo ATM iyo ku dhawaad ​​4,900 laamood. Waxaad sidoo kale ku bixin kartaa biilasha, jeegag dhigashada, kaarkaaga xirtaa, iyo inbadan oo kale adoo adeegsanaya barnaamijka moobiilka ee Chase. Ma jiro shuruud dhigaal furitaan oo ugu yar, laakiin si aad ugu qalanto abaalmarin, waxaad u baahan doontaa inaad lacag dhigato.
#4. nbkc Bank
0.80% None Kharashka
nbkc waa mid ka mid ah bangiyada internetka ugu nabdoon ee ku jira liiskayaga. Si ka duwan bangiyada kale, nbkc ma bixiso khidmad bille ah, wax lacag ah kuma lahan bixinta (soo noqnoqoshada), ma jirto lacag dhaafsiisan ama khidmadaha lacageed oo aan ku filnayn, lacagaha joogsiga bilaashka ah, iyo wareejinta siligga bilaashka ah.
bangk nbkc wuxuu kugu soo celinayaa khidmadaha ATM -ka ee aad siiso bangiyada kale (ilaa $ 12 bishii) haddii aadan awoodin inaad hesho mid ka mid ah 32,000 oo ATM oo lacag la’aan ah. Ma jiraan wax deebaaji ah oo ugu yar oo looga baahan yahay in koontada qof walba heli karo.
#5. Ururka Credit Consumers
Ilaa 4.09% (Waxaa lagu jaray $ 10,000) None APY
Ururka Macaamilka Macaamiisha waa bangi onlayn ah sida qamriga oo bixiya qiimaha ugu sarreeya koontada jeegga. Waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso shuruudo gaar ah si aad u sarayso sicirkaaga. Ururka Macaamilka Macaamiisha ayaa leh dhowr darajo oo abaalmarin ah, taas oo kuu oggolaaneysa inaad kasbato dulsaar yar marka aadan buuxin dhammaan shuruudaha.
Waxaad ku furi kartaa koonto ugu yaraan $ 5, laakiin ma jirto shuruud dheelitir oo joogto ah oo socota. Ma jiraan wax khidmad ah oo bille ah, qof kastana wuu ku biiri karaa Ururka Macaamiisha ee Macaamiisha.
#6. Bangiga Charles Schwab
0.03% None Adeegga macaamiisha
Charles Schwab waa adeeg maaliyadeed oo adeeg maaliyadeed oo buuxa oo bixiya alaabada maalgashiga, xisaabaadka hawlgabka, bangiyada, iyo amaahda guriga.
Koontada Hubinta Maalgashiga Sare ee Bangiga Schwab uma baahna khidmado bille ah iyo shuruudaha dheelitirka ugu yar. Sidoo kale, ma jiro shabakad ATM oo la socota Schwab oo bixisa lacag -bixinnada ATM ee aan xadidnayn.
Schwab wax lacag ah kama qaado khidmadda macaamil shisheeye marka aad kaarkaaga debit ku isticmaalayso dibadda. Barnaamijka Schwab wuxuu ku siinayaa dhammaan astaamaha aad filan lahayd, oo ay ku jiraan deebaajiga jeegga gacanta.
#7. Macallimiinta Evansville Union Credit Credit
Ilaa 3.30% (Waxaa lagu jaray $ 20,000) None Abaalmarinta
Ururka Macallimiinta Fedaraalka ee Evansville (ETFCU) waa mid aad u gaar ah oo ah inay ku bixiso qiime tartan ah dheelitirka aadka u sarreeya. Waxaad kasban kartaa heerka ugu sarreeya illaa $ 20,000.
Lagaagama baahna inaad bixiso khidmad bille ah ama shuruudaha dheelitirka joogtada ah ee koontada Vertical Checking, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo ugu yaraan $ 25. ETFCU waxay siisaa helitaan ku dhawaad ​​5,000 oo ATM lacag la’aan ah waddanka oo dhan.
App -ka gacanta ee ETFCU wuxuu bixiyaa astaamo bangi oo muhiim ah sida deebaajiga mobilada, waadna xaqiijin kartaa haddii aad buuxiso shuruudaha billaha ah ee loo baahan yahay si aad u kasbato heerka ugu sarreeya.
#8. Bangiga Qaranka ee American Express
0.80% dhammaan heerarka kaydka, 0.30% CD-ga 18 bilood ah None Kaararka amaahdu waxay bixiyaan lacag caddaan ah
American Express waxay bilaabatay 1850kii iyada oo ah adeeg boosto oo toos ah New York. Maanta, American Express waxay caan ku tahay kaararka deynta ee bixiya lacag caddaan ah, mayl diyaaradeed, dhibco hoteel, iyo Abaalmarinno Xubinnimo. American Express waxay kaloo bixisaa xisaabaadka kaydka, CD -yada, amaahda shaqsiga, sarifka lacagaha qalaad, iyo adeegyada kale ee bangiyada.
0.10% hubinta, 0.65% kaydka, 0.30% CD-ga 12-bilood ah None Gaaritaanka ATM
Capital One, oo hore loo yiqiin Capital One 360 ​​ayaa ku taxan mid ka mid ah bangiyada internetka ugu nabdoon ee Maraykanka. Calaamadda 360, si kastaba ha ahaatee, waxay ku sii jirtaa magacyada wax -soo -saarkeeda bangiyada onlaynka ah, sida koonto -hubinteeda 360.
#10. Bangiga CIT
0.50% Kaydka, 0.25% eChecking,
0.55% suuqa lacagta, iyo 0.30% CD-ga 12-bilood ah None Lacag bixinta ATM
Bangiga CIT wuxuu bixiyaa keydin, badeecadaha suuqa lacagta, shahaadooyinka deebaajiga, iyo sidoo kale koontada jeegga. Dadka wax iibsada waxay ka amaahan karaan bangigan.
Bangiga CIT wuxuu bixiyaa koonto Dhisme Kayd (koonto u baahan macaamiisha inay ilaaliyaan dheelitirka $ 25,000 ama ka badan). Markaad buuxiso shuruudahan, waxaad kasbataa dulsaarka Tier Sare.
#11. Marcus waxaa qoray Goldman Sachs
0.60% kaydka, 0.85% oo ku jira CD-ga wax-soo-saarka leh 12 bilood oo leh dheelitirka ugu yar $ 500. None CD aan ciqaab lahayn
Goldman Sachs waa mid ka mid ah magacyada ugu sarreeya maalgashiga saafiga ah. La aasaasay 1869, shirkadani waxay bixisaa bangiyada maalgashiga, adeegyada macmiilka hay'adaha, maalgelinta iyo amaahda, iyo maareynta maalgashiga.
Marcus wuxuu bixiyaa xisaabaadka keydinta ee internetka, CD -yada, iyo amaahda shaqsiyeed. Haddii aad raadineyso qiime sare adiga oo aan ku xirin lacagtooda CD-ga muddada-dheer, Marcus wuxuu bixiyaa CD-ga 7-bilood ee ciqaabta ah. Waxay leedahay deebaaji ugu yar $ 500 oo aan lahayn ciqaab bixitaan hore haddii aad u baahan tahay inaad hesho lacagtaada.
#12. Bangiga Radius
0.10% dheelitirka $ 2,500 ilaa $ 99,999.99; 0.15% dulsaarka $ 100,000 iyo wixii ka sareeya None Lacagaha ATM ee aan xadidnayn
Bangiga Radius wuxuu xaruntiisu tahay Boston, Massachusetts. Radius wuxuu leeyahay hanti ka badan $ 1.3 bilyan wuxuuna ku guuleystay abaalmarino hal -abuurnimo badan sanadihii la soo dhaafay.
Bangigani wuxuu soo bandhigayaa noocyo kala duwan oo alaab bangiyeed dhaqameed ah oo loogu talagalay macaamiisha, ganacsiyada, iyo macaamiisha hay'adaha. Waxaad ka heli doontaa hubinta, kaydinta, CD -yada, iyo amaahda, iyo sidoo kale adeegyada maareynta iyo kaashka ee macaamiisha leh baahiyo aad u adag.
Adiga oo ilaalinaya $ 2,500 dheelitirka dheelitirka tooska ah ee bil walba, waxaad heli doontaa 1.00% dib -u -soo -celin dhammaan iibsiyada kaarka debit ee koontada jeegga.
#13. Barclays Keydka Mareykanka
0.60% None Macaamiisha iyo kaararka deynta ganacsiga yar
Waxaa la aasaasay 1690 -kii Lombard Street ee London, England. Barclays wuxuu markii hore bilaabay inuu ka ganacsado sidii baananka dahabka. Maanta, Barclays waxaa lagu yaqaan macaamiisheeda iyo kaararka amaahda ganacsiga yar yar oo leh magacyo qoys sida JetBlue iyo Hawaiian Airlines.
Barclays wuxuu soo saaray mishiinkii ATM -kii ugu horreeyay ee adduunka bishii Juun 1967 -kii Enfield, waqooyiga London wuxuuna sidoo kale bixiyaa akoonno kaydinta onlaynka ah iyo CD -yo.
#14. Isku ekaansho
0.75% None Gaaritaanka ATM
Synchrony oo hore loogu yiqiin GE Capital Retail Bank waa mid hoos timaada Synchrony Financial, oo xarunteedu tahay Stamford, Connecticut.
Synchrony wuxuu bixiyaa dalabyada ugu fiican ee kaydinta, suuqa lacagta, CD -yada, mana ka qaado khidmadaha ATM. Waxaad heli kartaa ilaa $ 5 khidmad ah markaad isticmaaleyso ATM -yada gudaha.
15 Meesha ugu jaban ee lagu bixiyo jeeg
Xisaabta Kaydka Ganacsi ee ugu Sareeya ee 10 ee Ugu Sareysa
Ally Invest vs Robinhood: Xulashada ugu Fiican | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Celceliska Lacagta Caymiska Nolosha ee 2021 | Eeg Shaxda
Helitaanka bangiga saxda ah ee bangiyada 2265 ee ku yaal 277 magaalo oo kala duwan oo ku yaal Tennessee (sida lagu arkay Search-banks.com) waxay noqon kartaa…
Haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah oo maaliyadeed, kaydkaaga ayaa ku ilaalin kara. Mid ka mid ah xeerka caanka ah ee lacagta ayaa sheegaya…
Xisaabaadka Hubinta Wadajirka ah ee ugu Fiican 10
Xisaabaadka hubinta wadaagga ah waa xisaabaadka hubinta bangiga oo u oggolaanaya dad badan inay ku maareeyaan lacagta koontada.…
Miyaad haysataa kaarka deynta laakiin eedeymaha ayaa kaa dhigay inaad daadiso? Uma baahnid inaad…
Helitaanka bangiyada ugu fiican adiga ayaa had iyo jeer sameeya khiyaanada. Waxay si otomaatig ah ugu beddeshaa khibradaada bangiga wax…